Tsimialonjafy – Andoharano Tsimbazaza: tafakatra 10 ireo namoy ny ainy nihotsahan’ny tany | NewsMada
Tsimialonjafy – Andoharano Tsimbazaza: tafakatra 10 ireo namoy ny ainy nihotsahan’ny tany
Loza tampoka tao anatin’ny orambe ny asabotsy hariva teo! Nihotsaka ny vatobe iray teny amin’ny fokontany Tsimialonjafy Andohalo, fantatra amin’ny hoe “Tohatohabato 416”, io asabotsy io tokony ho tamin’ny firy 7 ora hariva. Nifatratra tamin’ny trano miisa efatra teo ambany teo izany. Nirodana avokoa ireo trano ka nahatototra ny olona tao anatiny. Olona fito ny fantatra fa maty tamin’izany, araka ny vaovao avy amin’ny zandary, omaly hariva. Efatra ny avotra soa aman-tsara ka naratra mafy ny roa. Mbola misy olona roa kosa anefa karohina hatramin’ny omaly hariva.
Nisy tamin’ireo namoy ny ainy ny mpianaka miisa dimy ka ny renim-pianakaviana ihany no avotra. Maty ny raim-pianakaviana niampy ny zanany vavy, 18 taona, sy ny zanany lahy vao valo taona monja. Anisan’ny namoy ny ainy koa ny renim-pianakaviana sy ny zanany vao efa-bolana monja.
Nanahirana ny asa fikarohana ireo tototry ny trano sy ny tany efa hatramin’ny asabotsy alina. Razana iray no hita, ny alin’ny asabotsy. Nitohy, omaly maraina sy ny tontolo andro, ny fikarohana. Nifarimbona nanao ny asa fikarohana ny zandary, ny miaramila ary ny mpamonjy voina. Tonga teny an-toerana ihany koa ny praiminisitra sy ny minisitry ny Mponina, ny asabotsy alina, nizaha ny zava-nisy. Nankahery ny fianakavian’ireo traboina sy ireo mpitandro filaminana nanao ny asa nandritra ny orambe.
Telo ny maty teny Tsimbazaza
Io asabotsy tamin’ny 7 ora hariva io ihany, nisy ihany koa ny fihotsahan’ny trano teny Andoharano Tsimbazaza ka nahafatesana olona telo. Nisy mpianaka ihany koa tamin’ireo namoy ny ainy ireo. Trano miorina amin’ny toerana somary mikisilasila ihany koa ity tra-doza teny Tsimbazaza ity. Tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina sy ny mpitandro filaminana. Nanao antso ny avy amin’ny kaominina momba ireo loza ireo. “Ho fisorohana ny loza toy izao, mampilaza ny eto anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny hialan’ireo mponina mipetraka amin’ireny faritra mety hampidi-doza mety hisy tany mihotsaka na vatobe mety hikodia ireny ho fisorohana ny tranga mampalahelo toy izao toy izao nitranga izao”, hoy ny fanambarana.
Araka io tenin’ny kaominina io, mila mandray fepetra ireo olona mipetraka amin’ny toerana mety hampidi-doza. Ny orana rahateo, mbola hitohy haharitra. Eo ihany koa anefa ny fepetra hentitra azon’ny manam-pahefana raisina raha sendra misy ny tsy mety miala amin’ireny toerana ireny.